လွယ်ကူရိုးရှင်းသောအနောက်တိုင်းမုန်.ပျားသလက်( Pancake ) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
လွယ်ကူရိုးရှင်းသောအနောက်တိုင်းမုန်.ပျားသလက်( Pancake )
ဂျုံနုမုန်. .................၁ ခွက် (လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
နွားနို......................၁ ခွက် (.............။.................)
သကြား..................၂ ဇွန်း ( ထမင်းစားဇွန်း )
မုန်.ဖုတ်ဆိုဒါ ...........၁ ဇွန်း( လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
ထောပတ်................၂ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)( ပျော်အောင်ဖျော်ထားရန်)
ဆီသန်.သန်.............၂ ဇွန်းခန်.( မုန်.ဖုတ်ရာတွင်အသုံးပြုရန် )
ဂျုံမုန်. ၊ ဆော်ဒါမှုန်. ၊ သကြား. ၊ ဆား ၊ တို.ကိုသမသွားအောင်မွှေပေးပါ။
အခြားဇလုံတစ်ခုထဲမှာ နွားနို. ၊ ထောပတ် ၊ ကြက်ဥတို.ကို သမသွားအောင်
ခေါက်ပါ။ အရည်ပျစ်တစ်ခုအသွင်ရပြီဆိုမှ..ဂျုံမုန်.ထဲကို ပေါင်းထည့်ပြီး..
Non- Stick ဒယ်အိုးပြားလေးမှာ...ဆီသန်.သန်.ကို နှံ.အောင်သုတ်ပေးပြီး
ထမင်းစားဇွန်း ၂- ၃ ဇွန်းခန်.လောင်းထည့်ကာ..မုန်.ကော်ယောက်ပြားလေး
မိမိနှစ်သက်တဲ့ ပျားရည် ၊ ချောကလက်ရည် ၊ သကြားရည် ၊ ယိုမျိုးစုံနှင့်တွဲဖက်စားသုံးနိူင်ပါသည်..။
မှတ်ချက် ။ အသင့်သုံး pancake flour အသုံးပြုရင်တော့..ဆား ၊ သကြား ၊ ဆော်ဒါမှာသုံးစရာမလိုပဲအသင့်စပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်..အညွှန်းကိုသေချာ